စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> ဥယျာဉ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုတွင်မဆို DIY ရှိသည်။ နှင့်အတူ ဥယျာဉ်၌ DIY လမ်းညွှန်နှင့်သင်ခန်းစာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည် ငါတို့ဥယျာဉ်အတွက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၊.
မင်းလိုချင်တာကမင်းရဲ့ဥယျာဉ်အတွက်အကြံဥာဏ်ရှိရင်အလိုအလျောက်ရေလောင်းချိန်ကနေပန်းပွင့်တစ်ခု၊ ဖန်လုံအိမ်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်မျိုးစေ့ကြဲဖို့ကိရိယာတစ်ခုရှိရင်၊ မင်းကဘယ်မှာဝယ်နိုင်လဲဆိုတာမကြည့်ဘဲဒီမှာကြည့်ပြီးစဉ်းစားပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲ.
နှင့်အတူ padding စနစ်အသစ် မင်းကအများကြီးကြိုက်ပြီးပုံတူပွားတာများတာကြောင့်မင်းသတိထားရမယ်။
၎င်းတို့ကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကွဲပြားသောနည်းလမ်းများ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းစနစ်များရှိသည်။ ဒီနေ့ငါတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ် ခရုများသည်သစ်ပင်များသို့မြင့်သောအပင်များတက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည် တိုးတက်စေရန်နှင့်၎င်းကိုပိုမိုနည်းလမ်းများဖြင့်သုံးရန်စိတ်ကူးများ။ ၎င်းတို့သည်အပင်များပေါ်သို့တက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်လှည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ်ငါဥယျာဉ်နဲ့တူတဲ့ပြသနာရှိတယ်။ ငါတို့မြေကိုပြင်ဆင်၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့စိုက်ပြီးပြီ ပေါင်းပင်များသို့မဟုတ်စွန့်စားလိုသောမြက်များသည်အရာအားလုံးကိုသိမ်းယူလိုက်သည်မရ။ ဒါ့အပြင်ငါ့မှာထွန်စက်မရှိဘူး၊ အရာအားလုံးကိုပေါက်ပြားနဲ့လုပ်ရမယ်။
ဒီနှစ်ထဲမှာငါဒီပြသနာနှစ်ခုကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမယ်။ မြေကြီးအား mulch နှင့်ဖုံးအုပ်။ ထွန်ယက်ခြင်းမပြုဘဲပျိုးထောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားခဲ့သည်။ မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပထမရလဒ်တွေကအလားအလာကောင်းနေပြီ။
Cayenneအခြားအမျိုးမျိုး ငရုတ်သီးတောင့် ၎င်းသည်အပူအမြင့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းလူအများစုအတွက်ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့်၎င်းသည်လူသိအများဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးစပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်ဘုံအမည်များစွာရှိသည် - cayenne, cayenne ငရုတ်ကောင်း, ငရုတ်ကောင်းအနီရောင်, ငရုတ်ကောင်း။
၎င်းတွင် SHU ၃၀၀၀၀ မှ ၅၀၀၀၀ အထိရှိသည် Scoville စကေး.
အခုအချိန်မှာ ဒါဟာငါတို့အိမ်မှာရှိသည့်အာခေါင်ကိုအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာပြင်းထန်သောယားယံပေးထားပေမယ့်အလွန်အကျွံမခံရဘဲ။ အခြားသူများကြိုက်တယ် အဆိုပါ habanero သူတို့ကစကေးသွားနှင့်အလွန်အကျွံယားယံသွားကြသည် Carol Reaper၎င်းတို့သည်လူသားစားသုံးမှုအတွက်စဉ်း စား၍ မရနိုင်ပါ။
ဒီနှစ်မှာငါလိုချင်တယ် အဆိုပါ jalapenos စမ်းပါ.
El Carolina Reaper သို့မဟုတ် Carolina Reaper သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပူဆုံးငရုတ်သီးဖြစ်သည် Scoville ယူနစ်များ၏တန်ဖိုးမှာ ၂၂၂၀,၀၀၀,၀၀၀ ရှိပြီး၊ ၎င်း၏ပုံမှန်အကွာအဝေးသည် မူတည်၍ ၁,၁၅၀,၀၀၀ နှင့် ၂၂၂၂၀၀၀၀ အကြားကွဲပြားသည်။ အဆိုပါ scoville စကေး။ အဲဒါကို inedible စေလိမ့်မည်ဟုတစ် ဦး ကအစစ်အမှန်ဒေါသ။ ယခု Pepper X ကဲ့သို့သောအခြားအမွှေးအကြိုင်များရှိသည်။
ဒါဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ် Capsicum chinense ကုမ္ပဏီမှ Ed Currie မှရရှိသော HP22BNH PuckerButt ငရုတ်ကောင်းကုမ္ပဏီ။ ဒါဟာအကြားတစ် ဦး လက်ဝါးကပ်တိုင်သည် အဆိုပါ Habanero ငရုတ်သီး နှင့် Naga Bhut Jolokia (ဒီနှစ်ဒီပျိုးခင်း၌ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူတော့မည့်)
ငါကသုံးတယ် အစေ့ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက်စောင်ကိုအပူပေးသည်။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ် (အပူ) စောင်ဖြစ်ပြီးမြေဆီလွှာ၏အပူချိန်ကို ၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြှင့ ်၍ မျိုးစေ့များမွေးခြင်းနှင့်အမြစ်များအမြစ်တွယ်ခြင်းကိုအရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ငါ၏အစေ့နှင့်အတူတကယ်ကောင်းသောရလဒ်များကိုရပြီ habañeroငရုတ်ကောင်း။ သူတို့ကို 8 ရက်အတွင်းအပင်ပေါက်ရန်အတွက်
မတူညီတဲ့မော်ဒယ်တွေရှိတယ်၊ အရွယ်အစားအပြင်စွမ်းအင်နဲ့မတူဘူး။ ၁၇.၅ WW ရှိသောသူများသည်များသောအားဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်ကို ၁၀% နှင့် 17,5W ၏ 10 မှ 40,5 ဒီဂရီအကြားမြင့်တက်စေသောများရှိသည်။ သင်ကလည်ပတ်သောအခါသင်နောက်ဆုံးအပူချိန်အထိအပူမရောက်မှီမိနစ် ၂၀ ခန့်စောင့်ရမည်။ သူတို့ကတပ်မက်ခြင်းအဘို့သို့မဟုတ်ပျိုးပင်တိုးဖို့အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒီနှစ်အမြဲအဖြစ်ငါနှောင်းပိုင်းတွင်အမှုအရာစိုက်ပျိုးခြင်းပေမယ့်ဟေးပါပြီ ငါ့မှာစောင်ထပ်နေပြီ။ ငါ့မှာရှိတယ် ဒီဟာကိုဝယ်လိုက်တယ်
သငျသညျအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားအရာအားလုံးရှိသည်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင်သင်ထားနိုင်ပါတယ် ဤကဲ့သို့သောအပူထိန်းကိရိယာသို့မဟုတ် Arduino နှင့် relay ကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ပါ (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဆိုင်းငံ့ထားသောစီမံကိန်း)
ငရုတ်ကောင်းမည်မျှရှိသည်ကိုတိုင်းတာရန် Scoville စကေးကို Willbur Scoville ကတီထွင်ခဲ့သည်။ မျိုးရိုးဗီဇအပင်များတွင်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သော capsaicin ပမာဏကိုအကဲဖြတ်သည် Capsicum။ သူသည် Organoleptic စမ်းသပ်မှုမှတစ်ဆင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကို ၀ ယ်ရန်နည်းလမ်းရှာရန်ကြိုးစားသည်။ ကန့်သတ်ချက်များရှိသော်လည်း၎င်းသည် organoleptic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်သော်လည်းလူတို့၏အကြောင်းအရာနှင့်၎င်းတို့၏အာခေါင်အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဖော်ပြသော်၎င်းသည်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယနေ့ (၁၉၈၀ ခုနှစ်မှစ၍) Capsaicin ပမာဏကိုတိုက်ရိုက်တိုင်းတာသည့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အရည် Chromatography (HPCL) ကဲ့သို့သောအရေအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ဤနည်းလမ်းများသည်ငရုတ်သီးအမှုန့်တစ်သန်းလျှင် capsaicin ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတွင် "pungency or hotness" ယူနစ်များတွင်တန်ဖိုးများကိုပြန်ပို့သည်။ ရရှိလာတဲ့ယူနစ်အရေအတွက်ကို x1980 တိုးပြီး Scoville ယူနစ်သို့ပြောင်းသည်။ Scoville သို့သွားရန်မလိုအပ်သော်လည်း၎င်းကို၎င်း၏တီထွင်သူကိုမလေးစားသောကြောင့်၎င်းသည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လူသိများသောစနစ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မတူကွဲပြားသောမျိုးစိတ်များတွင် Capsaicin ပါဝင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်နည်းနိုင်သော်လည်းစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များနှင့် / သို့မဟုတ်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များပင်ငရုတ်သီးသည်၎င်းသည်တူညီသောမျိုးစိတ်နှင့်ပင်လျှင်ပင်ပူသို့မဟုတ်နည်းပါးသည်ဟုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဒါဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ် Capsicum chinense.
ငရုတ်သီးနှင့်ငရုတ်သီး၏မျိုးစေ့များအထူးသဖြင့်အပူချိန်မလုံလောက်ပါကအပင်ပေါက်ရန်အချိန်များစွာကြာနိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ ၃၀ ဒီဂရီအထက်တွင်ထားပါက ၇ မှ ၁၄ ရက်အကြားအပင်ပေါက်ရန်ရင့်၊ ။
capsicum chinense ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာငရုတ်ကောင်းအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးလူသိများကြသည် habañeroငရုတ်ကောင်း, အ cayenne, အají panca နှင့်ají limo ။ ဒီနေရာမှာငါတို့မွေးမြူနေတဲ့ Habaneros အကြောင်းပြောမယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကစပြီးကျွန်တော်ခြောက်သွေ့လာတယ် ဖရုံသီး (dipper gourd) ကောင်းပြီ၊ အဲဒါကဘူးခွံထင်တယ်။ ၎င်းသည်ဆင်တူသည် Pilgrim ဖရုံသီး, ဒါပေမယ့်ဒီအများကြီး elongated ပုံသဏ္withာန်နှင့်အတူ။
1 ကိုသာသိမ်းပြီးကတည်းကငါအဲဒါကိုတစ်ခုအဖြစ်သုံးချင်တယ် ရေသယ်ဆောင်ရန်စစ်သုံးအိုးခွက်။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ငါတို့ကရှင်းပစ်လိုက်ရုံပဲ။